Madaarka Manchester-Boston iyo Myrtle Beach duulimaadyada diyaarada Spirit Airlines hadda
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Madaarka Manchester-Boston iyo Myrtle Beach duulimaadyada diyaarada Spirit Airlines hadda
Myrtle Beach, oo ah ku -biirinta cusub ee Spirit Airlines, ayaa calaamad u ah markii ugu horreysay ee MHT ay duullimaad aan joogsi lahayn ku tagto gobolka South Carolina.
Shirkadda Diyaaradaha ee Spirit Airlines waa diyaaraddii ugu horreysay ee MHT muddo 17 sano ah waxayna calaamad u tahay xilli cusub oo xiiso leh oo ballaarinta MHT.
Adeegga aan joogsiga lahayn ee Ruuxa ee Fort Lauderdale/Hollywood International Airport (FLL) iyo Madaarka Caalamiga ah ee Orlando (MCO) oo ka socda MHT ayaa maanta bilaabmay.
Lix toddobaad gudahood, adeegga aan joogsiga lahayn ee Ruuxa ee Madaarka Caalamiga ah ee Koonfur Galbeed ee Fort Myers (RSW) iyo Madaarka Caalamiga ah ee Tampa (TPA) ayaa bilaaban doona Noofembar 17 iyo 18, siday u kala horreeyaan.
Diyaaradaha Spirit Airlines ayaa soo degay Madaarka Gobolka Manchester-Boston (MHT) markii ugu horraysay maanta iyada oo Madaarku u dabaaldagay imaanshaha markabkooda cusub. Diyaaraddu waxay la timid war aad u xiiso badan, iyadoo ku dhawaaqday in lagu daray waddo xilliyeed, oo aan joogsi lahayn oo lagu tago Madaarka Caalamiga ah ee Myrtle Beach (MYR) laga bilaabo Abriil 20, 2022.
"Gegada Diyaaradaha ee Magaalada Manchester - Boston dhab ahaantii waxay ku jirtaa ruuxa in la xuso maanta! ” ayuu yiri Agaasimaha Madaarka Ted Kitchens, AAE “Waxaan rabnaa inaan soo dhoweyno oo aan u mahadcelino lamaanaheena cusub ee duulimaadka, Ruuxa Airlines, si loogu keeno adeeg cusub MHT afar meelood oo caan ku ah Florida iyo adeegga cusub Myrtle Beach, South Carolina. Iyo dhammaan rakaabkeenna ku duulaya duulimaadkii ugu horreeyay ee Ruuxa maanta - hambalyo inaad ka mid noqoto Samaynta Taariikhda Maanta! ”
Shirkadda Diyaaradaha ee Spirit Airlines waa diyaaraddii ugu horreysay ee MHT muddo 17 sano ah waxayna calaamad u tahay xilli cusub oo xiiso leh oo ballaarinta MHT. Myrtle Beach, oo ay ku darsadeen, waxay calaamad u tahay markii ugu horreysay ee MHT ay duullimaad aan joogsi lahayn ku tagto gobolka South Carolina.
“Waa dareen weyn inaan awoodo inaan keeno More Go oo aan ku dhawaaqo adeeg dheeraad ah Maalinta Koowaad,” ayay tiri Lania Rittenhouse, oo ah Ku -xigeenka Madaxa Ruuxa ee Khibradda Martida & Calaamadda, iyo Madaxweynaha Mu’asasada Samafalka ee Ruuxa. “Waa farxad buuxda in aan u adeego MHT. Waxaan aragnaa fursado waa weyn waxaanan u hanqal taagaynaa inaan tusno martidayada New Hampshire sababta Ruuxu u yahay qiimaha ugu fiican cirka. ”
Adeegga aan joogsiga lahayn ee Ruuxa ee Fort Lauderdale/Hollywood International Airport (FLL) iyo Madaarka Caalamiga ah ee Orlando (MCO) oo ka socda MHT ayaa maanta bilaabmay. Lix toddobaad gudahood, adeegga aan joogsiga lahayn ee Ruuxa ee Madaarka Caalamiga ah ee Koonfur Galbeed ee Fort Myers (RSW) iyo Madaarka Caalamiga ah ee Tampa (TPA) ayaa bilaaban doona Noofembar 17 iyo 18, siday u kala horreeyaan.
"Ruuxa Airlines wuxuu u keenayaa dadka deggan New Hampshire wixii ay codsadeen - meelo badan oo aan joogsi lahayn iyo qiimo jaban, ”ayuu yiri Guddoomiyaha New Hampshire Chris Sununu. Sababtoo ah iskaashigan xiisaha leh, waxaan hadda haysannaa - markii ugu horreysay abid - duulimaad aan joogsi lahayn oo ka socda New Hampshire kuna sii jeeda South Carolina. Fursad weyn u ah Gobolka Granite! ”
MHT iyo Spirit waxay marka hore ku dhawaaqeen side cusub iyo duulimaadyada Juun 16, 2021.